Sawirro: BIIXI oo safar deg deg ah ku gaaray JABUUTI - Caasimada Online
Home Somaliland Sawirro: BIIXI oo safar deg deg ah ku gaaray JABUUTI
Sawirro: BIIXI oo safar deg deg ah ku gaaray JABUUTI
Jabuuti (Caasimada Online) – Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa saaka safar deg deg ah ugu amba-baxay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti, iyada oo si weyn loogu soo dhoweeyey gudaha magaalada caasimada ah ee dalkaasi.
Safarkan ayaa waxaa Muuse Biixi ku wehlinaya wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir (Faratoon) iyo xubno kale oo ka tirsan maamulkaasi.
Madaxweynaha Somaliland ayaa inta uu joogo uu wadanka Jabuuti kulamo gaar gaar ah la qaadan doono madaxda sare ee dalkaasi, isaga oo kala hadli doono arrimaha siyaasadda & qodobo kale oo muhiim ah.
Warsaxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Somaliland oo si kooban looga hadlay socdaalka Muuse Biixi ayaa waxaa lagu sheegay inuu salka ku hayo arrimo ku aadan danaha, xiriirka & iskaashiga ka dhexeeya labada dhinac.
Sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in Biixi & Geelle ay ka wada-hadli doonaan arrimo ku aadan dib u soo celinta wada-hadallada Soomaaliya iyo Somaliland.
Si kastaba socdaalkan ayaa wuxuu ku soo aadayaa, iyada oo dhowaan madaxweynaha maamulka Somaliland uu booqasho ku tegay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya, halkaas oo uu wada-hadallo kula soo yeeshay madaxda sare ee wadankaasi.